Ungamvulela njani umntu kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 305
I-Instagram yenye ye uninzi lwenethiwekhi ezisetyenziswayo namhlanje, Abasebenzisi bayo abangaphezulu kwesigidi esi-1.000 bayasiqinisekisa kwaye inyani kukuba okwangoku abasebenzisi besi sicelo abasisebenzisi nje ukunxibelelana nabalandeli babo kunye nabahlobo babo, bayisebenzisa njengendlela yokuthengisa iimveliso kunye neenkonzo zabo, kuba le iqonga elisebenza ngokufanelekileyo.
Kodwa namhlanje asizukuxelela ngenzuzo yokuthengisa ngale ndlela, siza kuthetha ngendlela yokwenza xa, nokuba ngempazamo okanye ngokulungiselela kwangaphambili, uvimbe umsebenzisi, kwaye ufuna ukumvulela. Ukuba le yimeko yakho, ungakhathazeki Apha siza kukuxelela inyathelo ngenyathelo ukuba ungayenza njani.
Vula umntu kwifowuni yakho:
Kule meko into yokuqala yokwenza kukuba ngena kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwiprofayili yesicelo sakho, kuya kufuneka uye kwifayile ye- emazantsi ekunene ukusuka kwiscreen seapp.
Nje ukuba ukhetho luboniswe, kuya kufuneka ukhethe imigca emithathu ehambelana nefayile ye- ukhetho loqwalaselo lweprofayile yakho.
Cinezela kwezi kwaye imenyu yokuseta iya kuboniswa apho kuya kufuneka khona khangela kwaye ukhethe icandelo ifunyenwe emazantsi ale menyu.
Khetha ukhetho lwangasese, Ekupheleni koku kuyakubonisa icandelo elihambelana neeakhawunti ezivaliweyo, cofa kolu khetho.
Nje ukuba ifestile ityhileke iya kukubonisa zonke iiakhawunti ukuba ngaxa lithile uvimbile.
Apha kuya kufuneka ukhethe iakhawunti okanye umsebenzisi ofuna ukumvula, cofa malunga noku kwaye uya kubona iprofayile yakheCinezela icandelo elihambelana nokuvula.
Ngeli xesha isistim iya kukubuza ukuba uqinisekile ngale nyathelo, ukuba kunjalo, cinezela into yokuvula kwakhona yiyo lonto uyivulile.
Vulela umntu kwi-PC yakho:
Kule meko, into yokuqala yokwenza kukungenisa iakhawunti yakho ye-Instagram ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Akufanele uyilibale loo Instagram iapp eyenzelwe ukuba isetyenziswe kwiifowuni eziphathwayo kwaye ke inguqulelo yayo yePC ayikuniki ukhetho olufanayo nolo luhlobo lweselfowuni.
Nje ukuba ngaphakathi kwiprofayile yesicelo sakho, Kufuneka ubhale igama lomntu ufuna ukuvula kwiinjini yokukhangela.
Nje ukuba ibonakale kuwe iprofayile yakho kuya kufuneka ukhethe amanqaku amathathu kuphela ezibekwe kanye ecaleni kwegama lazo, oku kuya kukunika ithuba lokuvula, cofa olu khetho.
Ukuvula umntu ayisosiqinisekiso sokuphinda ufumane ubuhloboNje ukuba ubabambe kwi-Instagram, awusenxalenye yeenkqubo zabo kwaye loo mntu ushiya eyakho.
Ngokubhekiselele ekutshixeni nasekuvulekeni I-Instagram inobulumko kule nto, njengoko ingazisi enye into okanye enye. Ke loo nto liluncedo olukubonelelwa sisicelo.
1 Vula umntu kwifowuni yakho:
2 Vulela umntu kwi-PC yakho:
3 Kubalulekile ukukhumbula:
Ndingayenza njani imali kwiPinterest ngentengiso ehambelana nayo?